Nandrolone Phenylpropionate (NPP) Purogiramu, Zvigumisiro, Zvipo, Nhamba
chii Nandrolone Phenylpropionate/NPP?
Nandrolone Phenylpropionate (62-90-8) ndeimwe yevana analiclic steroid iripo pamusika. Iyi steroid ine zvinhu zvakafanana uye zvinokonzera Nandrolone Decanoate. Nhamba yekutanga yeNandrolone iyo inotengeswa yaiva Nandrolone Phenylpropionate (NPP). Ichi chinoshamisa chigadzirwa chakatanga kupwanya mashefuti mu1950s mushure mekusunungurwa na Organon nezita rechiratidzo Durabolin. Iyi steroid ishoma ester yakagadzirwa steroid, uye inowanzonzi NPP. Chikonzero nei Nandrolone Phenylpropionate isingafariri zvakawanda zvekududzirwa ndeyechidiki chester. Larger ester anabolic steroid akadai Nandrolone Decanoate kunakidzwa kushandiswa kukuru pakati pevatambi vechiremera uye varimi vemuviri sezvo vane hupenyu hwakareba kwenguva refu mumuviri. Kunyange zvakadaro, Nandrolone Phenylpropionate ichiripo inopa migumisiro inoshamisa kuvashandisi vayo vose. Nyanzvi dzakawanda dzevashandi dzinoshandisa Nandrolone Phenylpropionate pakuvaka muviri nekuvandudza kushanda kwavo.
Kwenguva yakati shure, zvakanga zvakaoma kuwana Nandrolone Phenylpropionate (62-90-8) pamusika iyo yakabatsira kuderedza kushandiswa kwayo nekududzirwa. Zvisinei, mumakore achangopfuura steroid yakatanga kuwanikwa nekuda kwemarebhu pasi pevhu ayo ari kunyanya kubudisa marudzi ose eDurabolin dosages. Mushonga uyu unowanikwa nyore nyore, uye iwe unogona kugara uchiita urongwa hwako pawebsite yedu chero nguva. Isu tinosunungura panguva, uye zvatinotengesa zvikwereti-zvine ushamwari. Tinogara tichikurudzira kuti uende kunorapwa kuchipatara usati watanga kushandisa chero ipi zvayo yavanabolic steroid. Nandrolone Phenylpropionate inofanirwa kunyatsotarisirwa sezvo inopa zvibereko zvakanaka uye zvinopfuura Deca Durabolin.
Kazhinji, Nandrolone Phenylpropionate sezvatakambotaura kare yakanga iri yekutanga Nandrolone mutezo kuti ibudiswe pamusika. Kutanga kwemukuru mukuru we steroid Deca Durabolin vakaita kuti Nandrolone Phenylpropionate inakanganwe mumugadziri wemuviri kwemakore akawanda. Mumakore ekutanga steroid majojo akaonekwa sechinhu chinokonzerwa nekubuda kwe heroin. Izvo zvipingamupinyi zvakakonzera kusarudzwa kwevatambi vakawanda pazvakauya kune steroids. Panguva iyoyo hapana mumiririri kana mutambi aida kufambidzana ne steroid injectable, uye iyo yakakanganisa kushandiswa uye kushandiswa kweNandrolone Phenylpropionate. Nokudaro, vanhu vazhinji vakagadzirirwa Deca Durabolin steroid iyo yakanga isingadi chero injini nguva dzose kuti munhu awane mhinduro dzaidiwa.
Kwenguva yakati, chigadzirwa chacho chakaita sechinyangarika pamusika, asi nhasi nhau dzakanaka ndechokuti iwe unogona kutenga zviri nyore chigadzirwa pa web site yedu. NPP haisi yepamutemo muUnited States of America kunze kwekunge yakatemerwa kushandiswa kwechiremba. Nhamba yevanhu inotarisa chigadzirwa ichi, nekuda kwemigumisiro yehutano iyo inopa kana yakashandiswa pakuvaka muviri. Dzimwe nguva zvakaoma kuwana chiremba uyo achapa chirongwa ichi chemishonga yekuvaka muviri. Zvisinei, inzwa wakasununguka kutitaurira chero nguva iwe une dambudziko, uye vashandi vedu vashandi vanogona kubvuma pane zvamunofunga.
Nezve hormone basa, Nandrolone Phenylpropionate(62-90-8) zvinoshandiswa zvakafanana neNandrolone Decanoate (360-70-3). Zvose vanabolic steroids vanoshandisa hormone yakafanana yakashanda, uye zvichida ndicho chikonzero nei vanhu vakawanda vachivhiringidza ivo sechimwe chinhu. Misiyano yakakura pakati pezviviri izvi steroids ndeyekuti Nandrolone Phenylpropionate ine ester shoma uye inopa mhinduro dzakanaka kana inoshandiswa kuburikidza nekujoka. Mushonga unayo hafu yehupenyu hunoti iwe unofanirwa kutora madhagi ako nguva dzose kuti uwane zviri nani uye zvinobudirira. Imwe misiyano pakati pezviviri izvi zvakanakisisa steroids ndeyokuti NNP inokurumidza kukurumidza mumuviri kupfuura Deca Durabolin, asi ine nguva shomanana inoshandiswa. NPP inodarika zvikomborero zvimwe vanabolic steroids inopa, iyo iri pakati pezvikonzero zvikonzero nei chigadzirwa chacho chiri chido munharaunda yezvokurapa uyewo pakati pevashandi vematunhu nevatambi. Itero steroid inokurudzira kubudiswa kwemasero matsvuku eropa kuwedzera kugoverwa kweropa nemuviri kune zvikamu zvose zvemuviri wako. Uyewo, mushonga unoderedza kuneta kunoreva kunyange pashure pokushanda kwenguva refu; iwe hauzovi nehupi hupi hunoita kuputika kana kupera.
The recommended Nandrolone Phenylpropionate dosage kubva kune 50-100mgs / zuva. Nhamba inofanira kuendeswa kuburikidza nejisi sezvo iri steroid injectable. Paunotora steroid iyi, unofanira kuchenjerera. Kana iwe usingazivi nzira yokuzvidzivirira iwe chidza chiremba wako kuitira kuti iwe ugone kuronga nguva dzose kushanyira mero. Nandrolone Phenylpropionate inogona kutorwa kana zuva rimwe nerimwe kana katatu pavhiki. Nokudaro, unogona kuronga nyore zuva remaji nechiremba wako uye kudzivirira zvinetso zvinogona kubuda kana iwe ukasvibiswa nemajekiseni. Kunyange zvazvo vamwe vanhu vanotya nheyo, Nandrolone Phenylpropionate inokuita kuti uwane mitsva yaunoda mukati menguva pfupi. Nokudaro, haufaniri kushandisa steroid kwenguva yakareba, uye iyo inhau yakanaka sezvo iwe uchingofanira kushivirira majekiseni kwenguva pfupi.
Vatangi vekutanga vanorayirwa kuti vatange nehotera shoma iyo inogona kugadziriswa gare gare kana ichienda kune inotevera Nandrolone Phenylpropionate cycle. Vashandi vepamusoro vakagadzikana vanotora dhiii mikuru inogona kutotangira kusvika ku 400-800mgs kwevhiki. Iwe unogona kutora nhengo yako yeNPP ne testosterone injodzi. Vaya vakadzi vanoda kuda kushandisa steroid iyi, funga kutora nPP dhigi dzinotarisana pakati pe50 kusvika 100mgs pavhiki. Kutora dhegi rinowedzera kunogona kukonzera kukura kwemasimba evanhu asinganzwi zvakanaka kunekadzi. Kunyanya kuderedza steroid iyi inogonawo kutungamirira kumigumisiro yakaipa, saka tanamatira mirayiridzo yechiremba wako kuti zvive nani. Kune vadzidzisi vemitambo uye vatambi, iwe unofanira kufambidzana nekufamba kwako nekushanda kwakakodzera nekudya kwezvibereko zvakanaka. Kana ukasangana nemigumisiro yakakomba mushure mekutora dhairi yako udza chiremba wako kuti apiwe sarudzo zvisati zvaitika. Masteron Propionate kana Masteron Enanthate? Ndeipi iyo iri nani kwauri?
Chiongorori chezvechiremba chinokosha usati watanga kutora Nandrolone Phenylpropionate dosage. Iwe unogona kunge uine humwe hutano hwehutano hwakadai sehosha yemwoyo pakati pevamwe isingakubvumiri kushandisa chero steroid. Kune mimwe mishonga zvakare isingatsigire kuendeswa neNandrolone Phenylpropionate. Kana iwe uri pasi pemishonga kune chirwere chero chipi zvacho chiudza chiremba wako usati watanga NPP purogiramu yako. Kunewo vanhu vanotora NPP yezvinangwa zvokurapa, uye munyaya iyo, muyero unogona kusiyana kubva kune mumwe murwere kuenda kune umwe. Nokudaro, chiremba wako achava munhu akakodzera kuti aone dhiyo yakakodzera yemamiriro ako.
Nandrolone Phenylpropionate (NPP) purogiramu
Sezvo NPP ishoma ester steroid inoreva kuti inoshanda zvakasimba mumuviri wako kuti ipe migumisiro yakakurumidza, mishonga yemishonga haifaniri kuva yakadaro. Iwe unogona kushandisa NPP kwenguva shoma seyenguva yevhiki ye6-8 uye uchiri kuwana mitsva iwe unofarira. Nokudaro, Nandrolone Phenylpropionate inokupa mukana wekuushandisa kwenguva pfupi uye uchienderera mberi nehupenyu hwako huripo sezvaunofarira mhinduro. Zvisinei, dzimwe nguva NPP purogiramu inogona kuenda kumasvondo e10 ayo achiri mashoma kana achienzaniswa ne deca Durabolin. Vakawanda vemuviri vomuviri vanoda kuda kushandisa NPP pamwe chete ne-long-ester steroid kuti ikurumidze migumisiro isiri iyo pfungwa yakaipa. Dzimwe nguva, iwe unogona kushandisa 2 injectable short-ester anabolic steroid uye uwane migumisiro yaunoda. NPP inonzi steroid inoshandiswa zvakasiyana-siyana, zvinoreva kuti inogona kuva yakakosha chero yekucheka kana kuputika. Kutora steroid nedzimwe mishonga yakadai seWinstrol ichava pfungwa huru mukusimudzira kushanda kwayo nokukurumidza. Tarisa purogiramu yeNPP iri pasi;
Nandrolone Phenylpropionate kukata mhepo
Vhiki Testosterone propionate Nandrolone Phenylpropionate Winstrol Masteron N2Guard Cardarine
Iwe unofanirwawo kuenderera mberi neAromasin seAl inhibitor, kutora kuwedzerwa zuva nezuva kwe12.5mgs. Dzimwe nguva maitiro anokwanisa kusiyana asi iwe unobvumirwa nemigumisiro yakanaka.
Nandrolone Phenylpropionate (NPP) migumisiro
Paunotora chero chigadzirwa kwete NPP chete, iwe nguva dzose unofunga nezvemigumisiro yaunotarisira pakuguma kwekufamba. Muchiitiko ichi, semuiti wegadziri kana mutambi, unoronga kuwana mishonga, kutema mafuta uye pakuguma kwezuva kuwana chimiro chako chaunoda muviri. Zvisinei, NPP inopa migumisiro yakasiyana zvichienderana nechikonzero chekushandiswa kwayo. Zvimwe zveNandrolone Phenylpropionate zvinowanzoitika zvinosanganisira;
Massive musimba musimba
Parizvino, pane vashoma chaizvo vanabolic steroid iyo inogona kuenzanisa nandrolone Phenylpropionate (NPP) migumisiro pamusoro pekupa hutano hwakanaka hwehutano pamwe nekuwedzera simba rako. Hazvisi nyore kutsvaga vatambi kana kuti vashandi venyama vachizvirumbidza nezvekuwana 20-30 mapaundi pavanoramba vachikodzera mukati memavhiki e10-12. Tsvakurudzo dzakawanda dzinoshandiswa pachigadzirwa ichi zvinodzokorora zvirevo kubvira apo Nandrolone Phenylpropionate inoshandiswa murapa rekurapa kurapa varwere vane zvirwere zvinoparadza zvirwere. Panguva yekushanda, masimba ako angangobvarura ndicho chikonzero nei iwe uchinzwa marwadzo zuva rinotevera mushure mekudzidziswa. Zvisinei, paunenge uchishandisa Nandrolone Phenylpropionate iyo haichazove yenyongedzo yako. Steroid inoporesa mishonga yako nekukurumidza mushure mekuita zvechisimba. Saka, kana iwe uchitsvaga chigadzirwa chinokurumidzira kuchinja muviri wako nekugadzirisa NPP.
Kunowedzera Nitrogen Kuchengetedzwa
Scientific, nitrogen ine basa rinokosha pakukubatsira kuti uwane mishonga yakaonda. Masero echisimba anofanana nokukurumidza neproteiniti yakawedzerwa apo pane inonzi nitrogen yakaenzana. Zvisinei, pano iwe unofanirwa kuve nechokwadi cheprotein yako yekudya, uye kudya kune simba yepamusoro ye nitrogen yekuwedzera chigumisiro. Nokudaro, kunyange iwe uri pasi pekucheka mutsara usazvidzivirira kune mukaka wehemp, uye wheatgrass iwe unowedzera musimba kukura. Kudya kunokosha zvikuru kunyanya mapuroteni achabatsira mukukurudzira musimba wako kukura.
Mibatsiro pamwe chete
Sokugadzirisa muviri, zvakaita basa rako rinosanganisira cardio yakasimba uye rinorema rinorema kusimudza kusimba hazvisi nyore pamatano ako. Nguva dzakawanda apo kuita zvakadaro zvakaoma kushanda majoini ako kunogona kukura marwadzo munguva. Chimiro chemiviri yakawanda nguva inonyunyutira marwadzo mushure mekushanda kwenguva yakati. Zvisinei, kushandiswa kweNPP kunobatsira mukusimudzira synthesis ya collagen inobatsira pakubvisa marwadzo ekubatana. Kuongorora kwesayenzi kunoratidza kuti kutora Nandrolone Phenylpropionate kunyange madhavha mashoma pavhiki se50mgs kamwe mumavhiki matatu, steroid icharamba ichisimbisa rudzi rwe III collagen synthesis. Iwe unofanira kugara uine rusununguko nachiremba wako kuti akubatsire iwe kana zvikamu zvekubatana zvikava zvakanyanya kana zvichitora kwenguva yakareba kuporesa.
Kununura migumisiro yakanaka kwazvo mune zvehutano
Kuwanda kwevanabolic steroid inoshandiswa mukugadzira muviri uye nevatambi vezvidzidzo midzi yavo inogona kutevedzerwa kubva mukurapa kwavo kushandiswa. Kuongororwa kwakasiyana-siyana kwakaratidza kuti Nandrolone Phenylpropionate inogona kubata zvirwere zvakasiyana-siyana zvinosanganisira osteoporosis, anemia pakati pezvirwere zvisingaperi. Kune rumwe rutivi, NPP inobatsirawo varwere veHIV neAIDS kuti vadzorezve kuwanda uye masimba. HIV / AIDS ndeimwe yezvirwere zvinozivikanwa zvinotungamirira kukurasikirwa kwekureruka. Zvisinei, paunenge uchishandisa NPP unogona kuva nechokwadi chekuti uwedzere kurema kwako sezvo mushonga unozivikanwa nekubatsira vashandisi kuwana mamwe mapaundi munguva pfupi nguva inobvira. Uyezve, Nandrolone Phenylpropionate inokurudzirawo kugadzirwa kwemasero matsvuku eropa zvichiwedzera kuwedzera kweropa mumuviri wako uye kuwedzerwa kupiwa kwezvibereko mumativi akasiyana emuviri wako. Uturu hwenyu huchabatsirwawo nokuwana zvakakwana zvinodiwa mumhepo yakagadzirisa iyo inokurudzira musimba kutsungirira mumhanyi kana kuti mabhasikoro.
Kuvandudza simba remuviri
Mutevedzeri mumwe nomumwe kana mabhasikoro anofanirwa kuva nesimba rakakwana remuviri uye simba rekuita basa rimwechete kwemaawa akawanda uyewo kupinda mumakwikwi makuru. Kuita muviri kwakakodzera kunobatsira mutambi kana muumbi wehuni kuti awane migumisiro yaanenge achida yakadai seyokupisa mafuta akawandisa uye kuwedzera kwemisungo yehutano. Zvisinei, vamwe vatambi dzimwe nguva vanoona zvakaoma kudzidzisa kwenguva refu nekuda kwekushaya simba rakakwana. Vakawanda veavo vave vachishandisa NPP mumabasa avo emitambo vanopa mazano akanaka uye maongorori pamusoro pekuti chibereko chacho chakaita sei basa rinokosha mukusimudzira kushanda kwavo. Chimwe chiitiko chakanakisisa chaunotarisira paunenge uchishandisa Nandrolone Phenylpropionate ndiko kukwanisa kwechirwere kuporesa mishonga, masangano pashure pekushanda zvakaoma. Kuneta kunowanzoonekwawo pakati pevashandi vakawanda uye mizimba yepamusoro nekuda kwekudzidziswa kwemazuva mazhinji, uye iyo ndiyo dambudziko raunofanira kukanganwa kana ukasarudza NPP steroid yako yaunoda mubasa rako rose.
NPP ine 'PP' ester yakanamatirwa iyo iyo inokonzera steroid iyi inoshandiswa hafu yeupenyu hwemazuva ane 6. Nokudaro, mushonga uyu ucharamba wakashanda mumuviri wako kwemazuva masere mushure mekutora dheji yako. NPP ine hupenyu hushoma hunoenzanisa ne deca Durabolin iyo ine mavhiki e2 hafu yeupenyu husano hunosimbiswa neester shomanana mune ichi chirwere. Ihafu yenguva-life steroid ine zvigaro zvayo kubvira apo mishonga inowanikwa muropa ropa nokukurumidza. Nokudaro, kuita zvakakurumidza uye kupa migumisiro munguva pfupi.
Pamusoro peiyo, haungatenderwi kutambisa kutanga steroid. Vashandi veNPP vanoonawo zvakanyanyisa zvakanyanya zve steroid kubva mumuviri unoita kuti zvipembenene zvako zvepituitary zvive nenguva pfupi. Dhipatimendi reNPP rakarongerwa maererano nehafu yeupenyu hunoita kuti uve nechokwadi chekuti unowana yunifomu uye zvinogadziriswa zvigaro mukati mekufamba.
Nandrolone Phenylpropionate (NPP) yekucheka
Kuderedza zvikamu zvakakosha kumunhu chero upi zvake wemuviri kana mutambi ane chinangwa chekuwana mishonga yakaonda uye yakasimba. Pane zvipembenene zvakanyanya muviri mumuviri wako zvinogona kukuramba iwe mukana wekuwana mishonga yakanakisisa kunyange mushure mokutora steroid uye kushanda zvakanaka. Saka, unoda steroid iyo inokubatsira mukubvisa mafuta asina muviri. Nandrolone Phenylpropionate inogona kuiswa pamwe nedzimwe steroid uye madhiragi kuti ataure nekukurumidzira, kubvisa kunaka kwehutano. Kunyange zvazvo NPP ichinyanya kuzivikanwa nechinangwa chekubata, kana zvakakoshwa zvakakodzera zvinogona kubatsira mukucheka maitiro. Iwe unogona kutarisa kumusoro kwe subtopic 3, tapa muenzaniso weNandrolone Phenylpropionate nekucheka kwerudzi uye kuti inofanira kuiswa sei kuti ive nemigumisiro yakanaka.
Kune zvikonzero zvakasiyana-siyana nei vatambi vakawanda uye vashandi vemuviri vanoenda kunogadzirisa mitsindo iyo huru kuti vagovashandise kupisa mafuta akawanda. Kuti iwe uwane humiri hwemuviri uye hutano hwakasimba hutsika, unoda kutanga kupisa mafuta pasi peganda rako. Iwe unogona kunge uchiona kukura kwemashupu mushure mekutora steroid, asi mishonga inokundikana kuonekwa sezvamunoda. Ndiwo mafuta anowedzera muviri anogona kukuvhiringidza muviri wako wekuvaka muviri. Chimiro chemuviri chinonyanya kukosha mune chero basa remitambo, unogona kunge wakagadzikana mumuviri, asi muviri wako hausi unofadza zvakakwana. Dzimwe mafuta emimba, somuenzaniso, akasindimara kunyange kana iwe ukashanda kwemwedzi. Kana zvakadaro, iwe unoda kuwedzera kuti ikubatsire kupisa mafuta uye kuwana chimiro chemuviri wako werota, chimiro pamwe chete nematumbo akanaka.
Saka chiremba wako, saka, achakubatsira iwe pakugadzirisa unhu hwekucheka. Kuchengeta mupfungwa kuti Nandrolone Phenylpropionate inogona kukura muviri wako, uchishandisa iyo pachaga ingasave iyo pfungwa yakanaka kana iwe unotarisira kupisa mafuta emuviri. Kutarisa chiremba wako usati watanga kutora steroid inozozokubatsira kuti uite zvinangwa zvako. Inenge yose steroid inobatanidza nemamwe matambudziko, asi iwe unogona kuvadzivisa paunotora Nandrolone Phenylpropionate pamwe chete nemiti yakagadzirwa nemishonga yakakodzera kana steroid dzakadai sa testosterone propionate pamwe nekucherechedza mazano ekurayira. Iyo inowanzoitwa Nandrolone Phenylpropionate yekucheka mitsara kubva kumashure e8-12, kunyange zvazvo inogona kutambanudzwa zvakare. Muviri wako unoita uye kushingaira kwechirwere chinoshanda mumuviri wako kunosarudza kana chirongwa chacho chichaderedzwa kana chakawedzerwa.
Nandrolone Phenylpropionate (NPP) yeBulking
Iyo yakaderera uyerogenic uye yakakwirira yevanabolic yeNandrolone Phenylpropionate inoita steroid yakanaka yezvinangwa zvekuderedza. NPP inogona kuiswa pamwe nemishonga yakasimba yemuromo yakafanana naDe Dianabol, Anadrol, uye testosterone kuti zvive nehutano hwekudzivirira. Nandrolone Phenylpropionate inozivikanwa nekukurudzira musimba kukura nekuwedzera simba remusimba. Kurarisana nemushonga uyu nekushanda kwakanaka uye kudya kunozoita kuti iwe uwane huwandu hwakakosha hwekubvisa. Kudhevedza kunokonzerwa nekurovedza kwakasimba kunosanganisira kurema kunorema kukwira kunogona kutungamirira kumarwadzo ekubatana pamwechete nemarwadzo emisonda. Zvisinei, kune vashandisi vaNandrolone Phenylpropionate, zvinetso zvinosangana nekushanda zvakaoma zvinoderedzwa nemuganhu wakakura. Semuenzaniso, NPP inobatsira kupora nokukurumidza uye kuporesa kwezvisungo zviviri zvinorwadza uye misumbu. Trenbolone Enanthate vs Trenbolone Acetate (Ndeupi Wins?)
Mishonga inosimudzira masero matsvuku eropa rinoita kuti kuwedzerwa oksijeni nemuviri zvinowanikwa. Nokudaro, zvinoita kuti muviri wako wose uzvigadzirise kuti uzvigadzirise pachavo munguva shoma shoma uye pamwe nekuvandudza kushandiswa kweg collagen. Pakupera kwezvinhu izvi zvose zvinowedzera, marwadzo achaenda, uye kuneta kuchava chinhu chekare. Zvidzidzo zvakasiyana-siyana zvakare zvakaratidza kuti Nandrolone Phenylpropionate inokosha pakubatsira vashandisi vane musero kuparadza zvirwere kuti vawanezve mapaundi avo vakarasika. Ndiyo mashoko akanaka kune vavanakomana vanoda kuda kuwana mishonga yakakosha uye mamwe mapaundi. Mune dzimwe mimwe mitambo yakadai sebhokisi, bhoja kana American football, ine musimba wakasimba, simba uye muviri wakanaka kwazvo huchava huwandu mumabasa ako. Saka iwe unoda kuvimba Nandrolone Phenylpropionate kuti zvive nemigumisiro yakanaka.
Nandrolone Phenylpropionate (NPP) inobatsira
Pane zvakawanda zvikomborero zvaunofara nazvo paunenge uchishandisa Nandrolone Phenylpropionate uye vamwe vatototaura kare munyaya ino. Zvisinei, zvikomborero zvinouya chete kune avo vanoshandisa mushonga nenzira yakarurama uye vanobatana nemirairo yose yekushandiswa inopiwa nachiremba. Steroid yakaratidza kuti inobatsira mukucheka kana kutenderera kumativi ose uyewo mune zvehutano. Anenge steroid yose inopa zvipo zvakasiyana-siyana kuvashandisi vanoita kuti vaonekwe pakati pezvimwe zvikwata. Nandrolone Phenylpropionate inobatsira inopa zvinotevera zvinobatsira;
Nandrolone Phenylpropionate kuva shoma estero steroid, inonyorerwa nyore nyore muropa uyewo inopa migumisiro yakakurumidza. Kuwanda kwevashandi veNPP kurumbidza iyo nekuvabatsira kuti vawane migumisiro yavanoda munguva shoma. Kunyangwe usati wapedza kugunun'una kwako kana kukwegura, iwe uchange uchinge uchinge uchiwana zviwanikwa. Izvozvo zvinoreva kuti haufaniri kushandisa chirwere ichi kwenguva yakareba kuti iwe uwane migumisiro yakadai semasumbu kukura uye musimba kukura. Vanhu vazhinji vanotya majekesiti asi chinhu chakanaka ndechokuti iwe uchangotora muyero kwenguva pfupi iwe unenge wakave zvakanaka kuenda.
Inovandudza kushanda kwese
Chikamu chakanakisisa che steroid iyi ndechekuti inobatsira vatambi kuti vawedzere kushanda kwavo pamakwikwi. Nandrolone Phenylpropionate inovandudza simba remuviri uye inopa simba mutambi wese anenge achida kukunda. Chirwere ichi chinotorawo basa rinokosha pakubatsira varimi, uye vatambi vanobvisa kuneta pamwe chete nekubatana kana kusuruvara kurwadziwa. Saka, vatambi vanogara vachinzwa vatsva nguva dzose sezvo kuneta ndechimwe chezvikonzero chikuru nei vatambi vakawanda vanorasikirwa mumakwikwi. Pakuguma kweNPP purogiramu yako semutambi, iwe uchave wakanyatsotsungirira kutsungirira iwe unoda kukusimbisa panguva yekudzidzira uye mumitambo.
Mune zvehutano, Nandrolone Phenylpropionate yakashandiswa zvikuru mukurapa zvirwere zvakasiyana-siyana zvisingaperi. Semuenzaniso, chirwere ichi chave chiri kubatsira varwere veHIV neAIDS kuti vadzorezve mishonga yakashata. NPP inosimudzira musimba kukura pamwe nekubatsira vashandi kuwana mamwe mapaundi. Vakawanda veHIV / AIDS varwere vanotambura nekurasikirwa nengozi yakawanda iyo inobata maitiro ekukura. Nandrolone Phenylpropionate inouya sechikomborero kuvarwere vakawanda vanoda kuwedzera kuwanda. Paruoko, NPP yakabatsira mukurapa kweanemia sezvo inokurudzira kugadzirwa kwemasero matsvuku eropa. Kugoverwa kwezvibereko kunowedzerawo nekukura kwemasero matsvuku eropa mumuviri wako zvichiita kuti tishu hukure. Nandrolone Phenylpropionate inewo zvimwe zvinhu zvinokosha zvinosanganisira collagen synthesis kunyange kana iwe uchitora masero maduku. Uyezve, NPP inogona kukurudzira chido chako kuchiita iyo steroid yakaisvonaka yezvikwata zvekubata.
Steroid inopesana nezvose zvekucheka uye kubvongodza
Ichokwadi kuti hapana mutambi kana muumbi wepanyama angada kushandisa steroid yakasiyana-siyana yekubvongodza ndokubva atarisa imwe yekucheka chikamu. Izvozvo zvinogona kuva zvinodhura pamwe nekukuisa pachena kune ngozi dzakawanda dzehutano. Zvisinei, Nandrolone Phenylpropionate inopa mukana wekuti iwe uwedzere uye ucheke mafuta akawanda emuviri sezvaunotarisira kuwana hutsika hwakakosha. Kunyange zvazvo NPP inowanzozivikanwa mukudhinda steroid, iyo yakaiswa zvakanaka zvakarurama inogona kukubatsira kuita chimiro chemuviri iwe unoda. Kudya zvakachena uye kushanda zvakanaka nenzira inozobatsirawo kuti unakidzwe neNandrolone Phenylpropionate zvakakwana mazano ekupedzisira. Kuti zvive nemigumisiro yakanaka, bvunza chiremba wako kuti akubatsire mukugadzira yakakodzera NPP kudyora kana kubhururuka.
Nandrolone Phenylpropionate (NPP) mhinduro
Nandrolone hormone ndechimwe chezvinhu zvakakosha vanabolic steroid zviripo pamusika nhasi. Iwe haugoni kuverenga top 5 steroid asingatauri Nandrolone Phenylpropionate Wongororo. Dambudziko rega nderokuti NPP haina kumbopiwa nguva yakakwana yekuvheneka, asi avo vakavimba nemishonga nguva dzose vanopa mhinduro yakanaka. Munyika yezvokurapa, NPP yakakosha pakurapa zvirwere zvakasiyana-siyana zvakadai seanemia, yakabatsira varwere veHIV neAIDS kuti vawanezve uremu hwakarasika pamwe nekuita kuti mishonga yakashata iwedzere. Uyezve, avo vane chirwere chepachirwere chepachirwere vakave variwo vanokosha vanobatsirwa nenyaya iyi inonakidza yeNandrolone. Tichitarisa zvakasiyana-siyana zveNandrolone Phenylpropionate kugadziriswa kwevatengi, uchaona kuti vazhinji vevashandisi vari kuratidza mufaro wavo mushure mekunge steroid yakavabatsira kuti vawane zvinangwa zvehutano hwavo. Vashandi vezvechiremba vakawedzerawo maonero avo pamusoro pechitero ichi chichitaura sechirwere chakasimba chakabatsira zviuru zvevarwere.
Mukuvaka muviri uye mutambi, Nandrolone Phenylpropionate ave achiita basa rinokosha mukuvandudza kushanda kwevatambi pamwe chete nekuita kuti vakwanise kuzadzisa zvinangwa zvavo zvekuchera kana kucheka. Kana ichienderana nekudya kwakakodzera uye kushanda NPP inopa mikana uye mhinduro dzinokurumidza. Kune avo vave vachitsvaka mishonga kuti vavabatsire kuwana mishonga yakaonda, kukurudzira simba remuviri, uyewo kuvabatsira kuti vawane chimiro chemuviri zvinodiwa nekugadzirisa Nandrolone Phenylpropionate ichava pfungwa huru. Steroid inozivikanwawo nekukwanisa kwayo kukurudzira chido nekugonesa vashandi kuwedzera mamwe mapaundi. Zvisinei, vamwe vanhu vanogunun'una nezvekuwana dzimwe Nandrolone Phenylpropionate madhara. Kazhinji, muviri wemuviri unoita zvakasiyana zvakasiyana nemiti yakasiyana-siyana zvakadai steroid. Majekiseni dzimwe nguva anotambudza vanhu vazhinji, asi chinhu chakanaka ndechokuti iwe uchangoshandisa steroid iyi kwenguva pfupi. Chiremba wako achakubatsira pakuraira mararamiro anowanzoitika. Nokudaro, hapana chaunoshushikana nacho kana iwe ukatora chirongwa chacho zvakanaka. Zvinhu Zvose Zvaunoda Kuti Uzive nezvaAnavar (Oxandrolone) yeMuvhuro
Uyezve, nhayo yeNPP inorongwa nenzira iyo inokubvumira kuporesa kubva mujecha rekare usati waenda kune inotevera. Nzira yakanakisisa yekuwana nayo Nandrolone Phenylpropionate inowanikwa ndeyekushandisa madhiragi zvakanaka uye kusanganisira chiremba wako mune imwe nguva yega kana chirongwa chekuita. Uyewo, iva nechokwadi chokuti iwe unotenga steroid kubva kuNandrolone Phenylpropionate. Kuwanda kwevashandi veNPP vanonyunyuta nezvekukuvadza ndeyeiye anodarika kana kukundikana kuenda kuchipatara chekuongorora asati ashandisa steroid.
Nandrolone Phenylpropionate (NPP) inotengeswa
Sezvambotaurwa, zvinogona kuva zvakaoma kutenga Nandrolone Phenylpropionate pasina chiremba chaiyo chiremba muUnited States. Zvisinei, mune dzimwe nyika umo mushonga wacho usingadziviriri, unogona kutenga nyore Nandrolone Phenylpropionate online kana kubva pasi pevhu. Pakutanga, zvakanga zvakaoma kuwana NPP sezvo yakange yakafukidzirwa nehanzvadzi yake huru Nandrolone decanoate. Pari zvino, isu tiri vatungamiri veNandrolone Phenylpropionate muchechi. Iwe unogona kugara uchiita urongwa hwako pawebsite yedu panguva ipi zvayo, uye isu tichaendesa chigadzirwa chako panguva. Tinogara tichishanda nesimba kuti tive nechokwadi chokuti unowana steroid yakadai kusanganisira Nandrolone Phenylpropionate pakati pevamwe vakawanda. Unogona Tenga Nandrolone Phenylpropionate muchizhinji kana kungotenga zvakakwana zvekufamba kwako. Inzwa wakasununguka kutitumira foni chero nguva yaunoda kuita urongwa kana kana une mibvunzo pamusoro pezvigadzirwa zvedu.
Usangotenda chero Nandrolone Phenylpropionate mhizha / mutengesi waunowana pamusika. Steroid yakafanana nedzimwe mishonga, uye iwe unofanira kugara uchichenjerera. Ita tsvakurudzo yako uye utore nguva yekunzwisisa kuti Nandrolone Phenylpropionate mhizha waunoda kuvimba inoshanda sei. Kana mutengesi asingakwanisi kukuvimbisa kuti unhu hwekugadzirwa kwezvinhu zvawo, tsvaga imwe nzira. Tarisa pane zvakasiyana-siyana mhinduro dzevabereki; ivo vachakubatsira iwe kuti uite chisarudzo chakanaka. Tinotenda kuti iwe unofanirwa ne-high-quality steroids iyo inounza zvigumisiro zvakanaka mukati mekidiki nguva inobvira. Isuwo tinogadzira uye tinopa Nandrolone Phenylpropionate powder kune vose vatengi vedu. Usati watenga steroid chero ipi zvayo unoita kuti uve nechokwadi kuti unonzwisisa mitemo munyika yako kuti usabhadharwa kana kuvharirwa. Kuti uwane mamwe ruzivo titikishe isu pa + 86 (1892) 9328602 uye isu tinokwanisa kukwanisa kubatsiri vashandi vanobatsira vashandi vanobatsira kana kupindura pane zvamunofunga.
NPP vs Deca yekuvaka muviri
Izvozvi nandrolone steroid zvishanduro zvose zvakaratidza kuti zvakakosha mukugadzirwa kwemuviri zvakanyanya muzvikamu zviviri zvekucheka uye kukwegura. Nezvemigumisiro, zvose Nandrolone Phenylpropionate (NPP) uye Nandrolone decanoate (Deca) kushanda nenzira imwe chete uye kuunza mimwe yakafanana zvakare. Izvo zvinoonekwa zvinowanikwa kuti iwe unofara kunosanganisira kuwedzera kukura kwemisumbu, kukura kwesimba remuviri uye kukurudzira kugadzirwa kwemasero matsvuku eropa. Misiyano yakakura pakati pezvinyorwa zviviri ndiyo esters inowanikwa kune imwe neimwe. Semuenzaniso, NPP ine pfupi pfupi phenylpropionate ester apo Deca ine nguva yakakura ye-decanoate ester. Kubatanidzwa kweesters ndicho chikonzero chekusiyana kwehafu yeupenyu hwemaviri steroid. Nandrolone Phenylpropionate (NPP) ine hafu yeupenyu hwemazuva 6 apo Nandrolone decanoate (Deca) hafu yeupenyu inokwira kusvika kumavhiki maviri. Mazamu eti steroid anosiyanawo kubva zvaanenge akarongwa maererano nehafu yavo-hupenyu.
Paunosarudza Nandrolone Phenylpropionate (NPP) (CAS 62-90-8), iwe unofanirwa kuvhara mazoro nguva dzose sezvo une upenyu hupfupi huri muropa rako. Nevashandi veNandrolone decanoate (Deca), iyo injectable dosages inogona kutarisirwa kaviri pavhiki. Itero steroid mbiri inogona kuita kukwezva kwakakwana nekucheka kwekucheka kuti ikurumidze pamwe nekukugonesa kuti uzadzise chinangwa chako. Mukutaura kwekukurumidza kwekuberekwa, Nandrolone Phenylpropionate inomira kunze uye ndicho chikonzero nei vatambi vakawanda vachigara vachida kushivirira majojo anowanzoitika. Nheyo dzeNPP dzakapfupika, zvinoreva kuti iwe chete unoda kutsungirira majekisi kwekanguva uye kuwana zvauri kurota. Neyepamusoro-soro Nandrolone Phenylpropionate, unogona kuva nechokwadi kuti uwane zvikwereti kunyange usati wazadzisa purogiramu yako.
Muchidimbu, steroid mbiri dzakanakisisa kana iwe uchizvishandisa nenzira yakarurama. Dzivisa kunyanya kuderedza uye kubatana nemirairo yese yeiyo yemigumisiro yakanaka. Kufambidzana nekufamba zvakanaka nekudya kwakakodzera uye kudzidziswa pamwe chete. Yeuka kubatanidza chiremba wako muhutano hwose kuti ugare kurugare rwakachengeteka. Nokuti ikozvino, sarudzo ndeyako, zvichida enda Nandrolone Phenylpropionate kana Nandrolone decanoate.
Brennan, R., Wells, JS, & Van Hout, MC (2017). Kushandiswa kwekushandisa kwechifananidzo nemishonga inokurudzira-kushandiswa (yakapiwa) muhuwandu hwevanhu: kuongorora kwakarongeka. Utano uye kuchengetwa kwevanhu munharaunda, 25(5), 1459-1531.
Roussel Geste, J., & Maldonado-Vlaar, CSC (2016). Migumisiro yechinyorwa anabolic androgenic steroids pane cocaine kugadzirisa uye kuzvidya mwoyo-kufanana nemafambiro evanhu vakuru(Doctoral dissertation).
Piacentino, D., D Kotzalidis, G., Casale, A., Rosaria Aromatario, M., Pomara, C., Girardi, P., & Sani, G. (2015). Anabolic-androgenic steroid kushandisa uye psychopathology mumitambo. Kuongorora kwakarongeka. Current neuropharmacology, 13(1), 101-121.
Brennan, R. (2017). Ethnopharmacological Yokudzidza yeInjecting Use of Performance and Image Kuwedzera Zvinodhaka (PIED) Volumes I & II(Doctoral dissertation).
Jardí, F., Laurent, MR, Dubois, V., Kim, N., Khalil, R., Decallonne, B., ... & Claessens, F. (2018). Androgen uye isrogen chiito pane zvechiito chechimiro: nhau kupfuura misi. Nyaya ye Endocrinology, JOE-18.